छोटकरीमा यस हप्ता : थुनिएको महाकाली नदीदेखि प्रधानमन्त्रीको आमसभासम्म
माघ तेस्रो साता कोरोना खोप भित्रिएपछिको नेपाल, महाकाली नदि थुनियो, विप्लव समूहसँग मैत्री सम्बन्ध बनाउँदै सरकार, पशुपतिमा १४१ किलो सुनको जलहरी, प्रचण्ड-नेपाल समूहकाे हड्ताल, सेनाकाे बख्तरबन्द, प्रधानमन्त्रीकाे आमसभा, 'पुटिन प्यालेस' को रहस्य, म्यान्मारमा सैनिक कू, भारतमा नयाँ आवकाे लागि बजेट लगायतका विषयवस्तुहरू चर्चाका केन्द्रमा रहे। हप्ताभरका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई छोटकरीमा यहाँ एकमुष्ट पढ्नुहोस्।
सरकारले भारतबाट अनुदानमा आएको पहिलो चरणको खोप प्रयोगमा आएपछि मात्र दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्ने बताएको छ। पहिलो चरणको कोभिड खोप अभियानको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ? कोरोना खोप भित्रिएपछिको नेपालको अवस्था कस्तो देखिदै छ? छोटकरीले तयार पारेको यी सामाग्रीहरू पढ्नुहोस्।
छोटकरीमा यस साता : कोरोना खोप भित्रिएपछिको नेपाल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनपछि विकसित परिस्थितिका बीच नेकपा ओली पक्षले भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास थालेको छ । भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई जिम्मेवारी दिएका समेत बताइन्छ ।
छोटकरीमा : वैद्यदेखि विप्लवसम्मलाई पार्टीमा मिसाउने ओलीको योजना
छोटकरीमा : विप्लव समूहसँग मैत्री सम्बन्ध बनाउँदै सरकार
भारतले बाटाे खन्दा झरेकाे पहिराेले दार्चुलामा नेपाल तथा भारत दुवैतर्फको महाकली नदी थुनिएकाे थियो। पहिरोले नेपाल तथा भारतपट्टि नदी थुनिएको हो। नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीहरू संयुक्तरूपमा पहिरो हटाउन लागिपरेका थिए।
छोटकरीमा : महाकाली नदि थुनियो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निवेदन दिएकाे छ। उता याे समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतले संसद पुनःस्थापना नगरे संसद बैठक बोलाएर ओलीलाई हटाउने बताएकाे छ।
छोटकरीमा : आधिकारिकता दावी गर्दै प्रचण्ड-माधव आयाेगमा
सरकारले चुनाव घाेषणा गरेसँगै बजारमा महँगी बढेकाे छ। बजारमा खासगरी दैनिक उपभाेग्य वस्तुहरूकाे मूल्य आकासिएकाे हाे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा भएपछि महँगी बढेको हाे।
छोटकरीमा: चुनावकाे घाेषणासँगै बजारमा बढ्याे महँगी
आज ‘सिमसार र पानी’ नाराका साथ सिमसार दिवस संसारभर मनाइयो। रामसारको सूचीमा सूचिकृत नेपालका १० वटा सिमसार क्षेत्रले नेपालको झण्ढै पाँच प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। तर सिमसार क्षेत्रले बढ्दो प्रदुषण, बढ्दो अतिक्रमण झेलिरहेको छ, यस सम्बन्धमा सरकार कत्तिको जिम्मेवार छ ?
छोटकरीमा : नेपालमा सिमसार क्षेत्रको अवस्था
काठमाण्डौको तारकेश्वर नगरपालिकामा पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएसँगै रोग अन्यत्र फैलन नदिन सरकार क्रियाशील देखिएको छ। रोग देखा परेको क्षेत्रलाई निसङ्क्रमण गरिसकेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । बर्ड फ्लुलाई लिएर नेपालको पछिल्लो अवस्था कस्तो देखिएको छ ?
छोटकरीमा : हड्तालमा जसको कमाइखाने ट्याक्सी जलाइयो!
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा रहेको चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको जलहरी राख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछी विवाद बढेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १२ ले पुरातात्त्विक वस्तुको स्वरूप परिवर्तनमा निषेध गरेको भन्दै पुजारी, स्थानीय र सरोकारवालाले पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न नदिने अडान लिएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा चलिरहेकाे संसद विघटनविरुद्धकाे मुद्दामा सरकारी वकिलहरू रक्षात्मक देखिएका छन्। इजालसबाट गरिने प्रश्नमा सरकारी वकिलहरू रक्षात्मक देखिएका हुन्। आजकाे बहसमा न्यायाधीश प्रस्ट हुन खोज्ने, सरकारपक्ष तर्कने अवस्था देखिएकाे छ।
छोटकरीमा : संसद विघटनविरुद्धकाे मुद्दा, सरकारी वकिल रक्षात्मक
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा अन्य‍ ३८ जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। रिट दायर गरेसँगै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। सम्मेलनमा उनले संविधानमाथि लगातार हमला भएकाले अदालतमा रिट निवेदन दिनुपरेकाे बताएका छन्।
छोटकरीमा : संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे आमसभा सम्पन्न भएकाे छ। दरबारमार्गस्थित नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि आमसभा गरिएकाे हाे। सभामा प्रधानमन्त्रीले देश पुनः पछाडि फर्किन नसक्ने बताएका छन्। सभा ऐतिहासिक भएकाे उनकाे दाबी थियाे।
छोटकरीमा : प्रधानमन्त्रीकाे आमसभा, ऐतिहासिक भएकाे दाबी
एउटा विलासी दरबार निर्माणका क्रममा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अवैध धनको प्रयोग गरी एक अर्ब पाउन्ड मूल्य खर्च गरेको दाबीसहित रुसका प्रमुख विपक्षी नेताले सार्वजनिक गरेको खोजपूर्ण भिडिओको कारण संसार स्तब्ध छ। के छ भिडियोमा आउनुहोस्, जानौं।
छोटकरीमा : के हो एक अर्ब पाउन्ड मूल्यको 'पुटिन प्यालेस' को रहस्य ?
भारतले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२१/२२ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्यो। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा पेश गरेकाे बजेट भारतीय इतिहासमै पहिलाेपटक 'ट्याबलेट'बाट सार्वजनिक गरिएकाे हाे। यसपटककाे बजेटमा भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकाे छ। त्यस्तै भारतले नेपाललाई दिँदै आएकाे अनुदानमा समेत वृद्धि गरेकाे छ।
छाेटकरीमाः भारतमा नयाँ आवकाे लागि बजेट सार्वजनिक
विश्वकै धनाढ्य तथा अमेजन कम्पनीका मालिक जेफ बेजोसले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)बाट राजीनामा दिने भएका छन्। उनको राजीनामा पश्चात अमेजनको सीइओ को हुनेछ र बेजोस कता जानेछन् ?
छोटकरीमा : अमेजनका सिइओ 'जेफ बेजोस'को राजीनामा
विश्वचर्चित वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले भारतमा जारी किसान आन्दोलनको पक्षमा आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याएकी छन् । यस्तै, पप स्टार रिहानाको एक ट्वीटले भारतभित्र यति गर्मी बढायो कि त्यसको रापको महशुस खेलाडीदेखि सेलिब्रेटीसम्मले गरे।
छोटकरीमा : रिहानको एक ट्वीट, जसले भारतमा तरंग ल्यायो
एसियन देश म्यान्मार (बर्मा) मा सैनिक कू भएकाे छ। म्यान्मारको सेनाले देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गर्दै नेत्री आङ सान सू ची लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरेको बताएकाे छ। घटनापछि अमेरिकी राष्ट्रपति जाे बाइडेनले पक्राउ परेका नेताहरू तत्काल नछुटे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकाे छ।
छाेटकरीमाः म्यान्मारमा सैनिक कू, संकटकाल घाेषणा